सुप विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसका दुई सय विरुवा रोपिए - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
सुप विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसका दुई सय विरुवा रोपिए
प्रकाशित मिति: २ भाद्र २०७५, शनिबार August 18, 2018
पप्पु गुरुङ्ग, दोधारा,भदौं २ – सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमा दुई सय विरुवा रोपिएका छन् । क्याम्पस हाता भित्र विभिन्न प्रजातिका विरुवा रोपिएका हुन् । भीमदत्त नगरपालिका वन वातावरण शाखा, जिल्ला वन कार्यालय र सुप विश्व विद्यालय वातावरण विज्ञान समूहका विद्यार्थीहरुको स्टेप क्लबले शुक्रबार सामूहिक रुपमा वृक्षा रोपण गरेको छ ।
भीनपाका वन वातावरण शाखा प्रमुख जीवछ यादवले स्वच्छ हरियाली बनाउन क्याम्पसमा वृक्षारोपण गरिएको बताए । भीनपाले हरित भीमदत्त भन्ने नारा अघि सारेको उल्लेख गर्दैं उनले भने, ‘यसबाट विद्यार्थीहरुबाट वन वातावरण संरक्षणमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ ।’ केन्द्रीय क्याम्पसका प्रिन्सिपल डा. भुपेन्द्र विष्टले विद्यार्थीहरुबाट वन वातावरण संरक्षणका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह र भावी पुस्ताका लागि प्रेरणाको सोत बन्ने बताए ।
वृक्षारोपण कार्यक्रममा विश्व विद्यालयका वातावरण विषयका शिक्षक तर्कराज जोशी, स्टेप क्लबका अध्यक्ष सहित पदाधिकारी, कर्मचारी र विद्यार्थीहरु सहभागी भएका छन् । भीमदत्त नगरपालिकाले नगरलाई क्लिन सिटी ग्रिन सिटी बनाउने लक्ष्यका साथ एक घर एक विरुवा वितरण र जनचेतना मुलक सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा भृकुटी माध्यमिक विद्यालय पछाडि जमिनमा डेढ नर्सरी निर्माण गरी डेढ लाख विरुवा उत्पादन गरी वितरण गरिएका थिए ।
काठमाडौं । नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय र जनवादी गणतन्त्र चीनको विदेश मन्त्रालयबीच नेपालमा चीन […]
सुन तस्करी प्रकरण : ३ जनाको ज्यान गयो,३३ जना अझै फरार, कहाँ गयो त ३३ किलो सुन ?
काठमाडौं । साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याका आरोपी चितवन जगतपुर ७ का प्रहरी हवल्दार अमरबहादुर […]
नाकाबन्दीले यसरी लिँदै छ नेपालीको ज्यान
कात्तिक २९ काठमाडौं, सिरहाका नेविसंघ जिल्ला कमिटी सदस्य कमलेशकुमार यादवले मोटरसाइकलका लागि केही पेट्रोल जोहो […]
गाईघाट –दिक्तेल सडक बन्द हुने
गार्इघाट । उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटदेखि छिमेकी पहाडी जिल्ला खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेलसम्म जोड्ने गाईघाट– […]
खानेपानीका कर्मचारीको पारिश्रमिक १२ माना मकै १
सोलुखुम्बु। वर्षभरी काम गरेबापत अन्न दिने चलन धेरैजसो ठाउँबाट हट्दै जाँदा सोलुखुम्बुको सोताङ गाविसमा भने […]